Kulankii xalay u dhaxeyay Juventus Vs Tottenham oo ku soo dhamaday bar bardhac – Walaal24 Newss
February 14, 2018	Off	By walaal24
Cayaartoyda kooxda Juventus oo lagu cayarayay gurigooda ayaa ku bilabeen dar dar oo ay la yimaden goolkii u horeyay daqiiqadii 2 aad oo uu dhaliyay Higuain, baas uu kahelay Pjanico, halkaasna hoganka ay ku qabatay Juventus.
Cayartoyga B.Davies kooxda Tottenham daqiiqadii 8 aad qaatay calamada jaalaha qalad uu galay ku abaalmariyay garsorha cayaarta.
Cayaarta marka ay mareysay daqiiqadii 9 aad dhaliyaha kooxda Juventus Higuain ayaa waxa uu layimid Goolkiisii labaad hogaanka kooxdiisan ugu dheereyay.
Xiligaa wixii ka danbeyay waxay cayaarta u muuqatay in sidaas Tottenham meeshas guul daro kala tigidoonto, lakiin sidaas ma manoqon.
Kooxda Tottenham oo laga sugayay in ay ku nayid jabot labada gool oo ay la timid kooxda Juventus, wey noqon weysay, kooxda ka timid Horyaalka England kana cayaarta, waxay la timid cayaar fur furan oo baas ku dhisan.
Cayaarta marka ay soo gaatay daqiiqadii 35 aad cayaartoyga Kane ayaa u dhaliyay goolkii koowaad kooxda Tottenham.
Cayaarta markii ay mareysay daqiiqadii 45 aad waxa jaala qaatay cayaaryahanka Bentancur ee kooxda Juventus, cayaarta oo lagu kala nastay 2 – 1.
Cayaarta qeebtii labad markii ay bilabatay Kooxda Tottenham waxay la timid dar dar oo ay doonayan in ay iska soo gu dan goolka labad.
Cayaarta markii ay mareysay daqiiqadii 47 aa waxa jaala qaatay cayaaryahanka Aurier oo u cayaara kooxda Tottenham.
Waxa kaloo jaala qaatay daqiiqadii 60 aad dhaliyaha kooxda Juventus Higuain, kuna qaatay markii qalad lagu galay kuna qeyliyay gorsooraha cayaarta.
Kooxda Juventus daqiiqadii 66 aad waxa bedel ku soo galay cayarhanka Bentancur waxa uuna bedelay Khadira.
Kooxda Tottenham oo la timid Gool koodii labaad ee barejada daqiiqadii 71 aad waxana u dhaliyay cayaaryahanka C.Eriksen.
Su’aalaha ku saabsan baahida loo qabo Pochettino inay ku guuleysato koob weyn ma ahan inay baxaan sababtoo ah barbaro 2-2 ah wareega 16ka. Laakiin kooxdiisa Spurs waa halkan, waxay ku tartamayaan kooxaha ugu waa weyn Yurub, islamarkaana ay ka fiicnaanayaan iyaga. Qeybaha quarter-finalka Champions League ayaa u muuqda. Taasina waa marxalad ay kooxdani ka badan tahay mudnaanshaha.
Cayaartana ay ku soo dhamatay daqiiqadii 90 aad eelagu daray laba daqiiqo oo dheetriga ah, cayaartana ku soo dhamatay Juventus 2 -2 Tottenham
Ciidamo tababar loogu soo xiray magaalada Baladweyne oo la gaarsiiyay degaanada Galmudug
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka oo shir Guddoomiyay kulan looga hadlayay Isdhex-galka Dhaqaale ee Geeska Afrika